IMIBUZO YOSHICILELO- IMIBUZO YEMIBUZO ENGAMA-80 YOMCULO ENEEMPENDULO- IRADIO TIMES - IMIBUZO
Imibuzo engama-80 yomculo kwimibuzo yakho yasekhaya
Wonke umntu uyazi ukuba umjikelo womculo ubalulekile kuyo yonke imibuzo efanelekileyo yokupapasha- kwaye ii-80s ngokulula yayizezona ndawo zibalaseleyo zomculo wanamhlanje. Ke kwixesha elizayo xa ubamba kwiQela leNdlu, iGoogle Hangouts, Zoom okanye uMthunywa, kutheni ungabuyiseli abahlobo bakho kunye nosapho kwixesha lomculo wokudanisa, is synth-pop kunye ne-glam metal?
RadioTimes.com Unomjikelo opheleleyo ozinikele kuye 80s umculo oza kuyisebenzisa kwindibano yakho elandelayo ye-intanethi- funda kwimibuzo engama-20 enobubi! Iimpendulo zingezantsi - akukho ukukopela…
Kwaye xa ugqibile, kutheni ungazami imibuzo yethu ye-TV pub, imibuzo yemidlalo yefilimu, imibuzo yomculo okanye imibuzo yemidlalo yesayizi? Kwaye kukho uninzi, oluninzi oluninzi lwemibuzo epapashiweyo ekhoyo njengenxalenye yesivuno sethu Ulwazi ngokubanzi malunga nemibuzo .
Yayingowuphi unyaka i-Live Aid?
Ngubani owacula u-1984 wabetha onke amakhala?
Yeyiphi i-albhamu eyaziwayo ye-AC / DC yaba yeyokuqala ukubonisa u-Brian Johnson?
Ngubani owacula umxholo wengoma yeefilimu ze-80s zeBond Ukukhanya kwemini?
Yeyiphi ividiyo yomculo eyimbonakalo yesitalato iQueen parody?
Ngoku inxulunyaniswa nerickrolling, yeyiphi ingoma ka-Rick Astley ka-1987 eyaba yinombolo kumazwe angama-25?
Ngowuphi omnye owanika uWhitney Houston inombolo yakhe yokuqala yase-UK ngo-1985?
Yeyiphi eyona nto yayithengiswa kakhulu kwiminyaka elishumi e-UK?
Leliphi iqela elalilinde ileta evela eMelika?
Ngubani oya ngqo kwinombolo enye ngo-1981 ngeStand and Deliver?
Ngubani owayeyinombolo yekrisimesi yokuqala ngo-1988 kunye nemistletoe newayini?
Ngowuphi umdlali odumileyo owayelinde iBananarama ngo-1984?
Ngubani oyena mculi weqela uFrankie oya eHollywood?
UBobby G, uCheryl Baker, uMike Nolan noJay Aston bangamalungu eliphi iqela?
Babeneminyaka emingaphi uGeorge Michael noAndrew Ridgely xa babebhala i-Careless Whisper- 17, 19, okanye 22?
Yeyiphi i-albhamu ye-U2 eyaba yeyona albhamu ithengisa ngokukhawuleza kwimbali yaseBritane ngelo xesha, yakha yakhutshwa ngo-1987?
Yeyiphi iconic Ingqondo elula Ingoma edlala ngexesha lokuvula kunye nokuvala iikhredithi zeQela lesidlo sakusasa?
Yeyiphi ingoma yohambo lwango-1981 eyahluleka ukuqhekeza i-UK ephezulu kuma-40 xa ikhutshwa, emva koko yafikelela kwinombolo 6 ngo-2009?
Nika igama le ngoma: Kuya kuthatha ixesha elininzi ukunditsalela kude nawe
Akukho nto inokwenziwa ngamadoda alikhulu nangaphezulu
Ngowuphi oyena mculi-umbhali wegama lokwenyani nguMichael Barratt?
Hlela iincwadana zakho zeendaba
Ukugcina lonke uthando lwam kuwe
Ngaba Bayazi ukuba yiKrisimesi?
UAdam kunye neembovane
URobert de Niro
Awunayo (Libala Ngam)
Sukuyeka ukukholelwa ’
umhla iimephu fortnite
Huawei iwotshi gt 2 pro
indlela yokwenza intambo kwi-alchemy encinci 2
uluhlu lohlaziyo lwePC yeminecraft
umdlalo wovavanyo wokulinganisa itheyiphu